10 Free Zavatra atao, Paris | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Free Zavatra atao, Paris
Fotoana famakiana: 7 minitra(Last Nohavaozina: 24/04/2020)
Misy be dia be ny zavatra Paris dia fantatra amin'ny. Fa Free ny zavatra tokony hatao ao Paris dia tsy zavatra izany dia fantatray fa. Zava-malaza noho ny maha iray amin'ireo tantaram-pitiavana toerana indrindra eto an-tany. A capital lamaody sy ny haisoratra paradisa mihitsy aza! Paris maro samy hafa guises. Ary raha mbola teny tranom-bakoka dia mety ho hantsana sy rongony fisakafoana tonga amin'ny Premium, frantsay renivohitra koa ho mora daty. Aza mino izahay? Eto dia 10 Free Zavatra atao, Paris!
1. Best Free Zavatra atao, Paris: Musée Carnavalet
Voalohany teo amin'ny lisitry ny 10 Free zavatra tsara indrindra tokony hatao ao Paris no Musée Carnavalet. Izany mozea efa nakatona nandritra ny roa taona ny fanavaozana goavana, Na izany aza, izany no fomba ofisialy nisokafan'ny Desambra, 20faha 2019! Miorina ao amin'ny tantara manodidina ny Marais, ny Carnavalet Museum dia natokana ho amin'ny tantaran'ny Paris. Avy ny fiaviany ho amin'izao fotoana izao.
Ny vahiny dia ho afaka ny hahita tsara tarehy fanangonana mifandray amin'ny tanàna. Avy Gallo Roman sy Moyen Âge zavatra sy ny tahirin-. Fahatsiarovana avy amin'ny Frantsay Revolisiona ho maro karazana sary hoso-doko, sary sokitra, fanaka sy ny zavakanto zavatra avy amin'ny vanim-potoana samy hafa ny fotoana!
Raha tia ny tanànan'i Paris sy ny fitiavana mba hanatsarana ny tenanao na kolontsaina sy manokana, you will thoroughly enjoy the Musee CarnavaleT! Ho gaga noho ny fanangonana sarobidy, ny maritrano, ary ny rivotra iainana, izay tena mampiavaka ny Paris!
Moa fotsiny ahy, na isaky ny olona iray milaza Notre Dame, Fotsiny aho mieritreritra ny Victor Hugo tsy hay hadinoina ny Notre Dame Hunchback? Na tia ny sarimihetsika na tsia, katedraly ity dia iray ny fitsidihana. Tsy vitan'ny no ho badass katedraly katolika Moyen Âge, fa ny tsara indrindra ihany koa ohatra ny frantsay gôtika maritrano avy!
Ny voaloto fitaratra varavarankely (indrindra fa ny Rose Window), ny fampiasana ny an'ireo trano tsipiriany toy ny buttresses manidina sy ny sary sokitra manao izany dia tsy maintsy mahita maimaim-poana ny zava-nitranga Paris. Fa ny tsara indrindra sary fahafahana avy amin'ny Katedraly mananika ny lakolosy tilikambo ho vorona maso jerena Paris. Raha mila jerena mihitsy ny Katedralin'i, Square Jean XXIII manome toerana tsara teboka mba haka aoriana fahitana ny tsara tarehy tsangambato. Best of rehetra? Izany dia momba antsika 10 Free Zavatra hatao ao Paris. Nahoana? Tsaina izany ianao. Tsy maimaim-poana!
3. Best Free Zavatra atao, Paris: The Pantheon
izany trano tsara tarehy tamin'ny voalohany vita Tahaka ny toeram-pivavahana. Na izany aza, ankehitriny izany dia efa niova fo ho amin'ny fasan'i. Izy io no misy ny sisa tsy malaza maro Paris; Victor Hugo, Marie Curie, Alexandre Dumas ny anarana fa vitsy! Ny Pantheons malaza Silhouette sy ny dome dia mihantona ny amin'ny an-tampon-Montagne Sainte Genevieve, ny manan-tantara havoana ny teny Quarter.
Avy Aprily ka hatramin'ny Oktobra, mpizaha tany dia afaka mankafy ny hevitra tsara ny an-drenivohitra avy any amin'ny lala-mitafon'i ny dome. Ny Neoclassical trano dia mampahatsiahy ny Pantheon tany Roma. Ny hoe nalevina tao amin'ny Pantheon dia heverina ho iray amin'ireo avo indrindra ao amin'ny voninahitra nomena ny olom-pirenena. Ny soratra teo amin'ny rindrina teo amin'ny fidirana ho any amin'ny fasana mitondra Testamenta ity fihetseham-po. To lehibe, ny mankasitraka tanindrazana.
Rahoviana ianao no mitsidika maimaim-poana? Nihevitra ianareo fa tsy manontany! Get Fidirana maimaim-poana isaky ny Alahady voalohany amin'ny volana avy 1 Novambra ho 31 March. Free ho an'ireo eo ambanin'ny 26 avy amin'ny firenena ao anatin'ny Vondrona Eoropeana, ary koa ny ambaratonga voalohany sy faharoa ny mpampianatra. Free ho an'ny sembana mpitsidika sy ny olona miaraka, ary koa ny asa sy ireo mpitady mandray soa panjakana frantsay. Maimaim-poana ihany koa ny tanora sy ny ankizy.
Koa akaikin'ny topping ny Free Zavatra hatao ao Paris Fa Free list. Mandeha ny halavan'ny Canal St Martin! Io sisa tavela iray ny favoris mandeha eto amin'ity tanàna ity. Nisy olona anankiray nanao renirano, ny lakandrano dia mikasika ny 4.5 km ela, mampifandray Canal de L Ourcq amin'ny Seine. Tamin'ny voalohany naorina 1802 ny Napolean ho avy horesahin'ity ny Ourcq River, mikendry ny hitondra rano fisotro madio ho any Paris valanaretina nitondra mety ho aretina toy ny kôlera sy ny nivalan-dra.
Isaky ny dimy ambin'ny folo taona eo ho ny lakandrano dia dredged mba hanadiovana azy io, fa tato ho ato mihitsy ny faritra manodidina ny lakandrano efa nasiam-revitalization. Mitadiava ny tohotra ny Pubs mihidy niely teny an-lakandrano. Amin'io faritra io ihany koa malaza Hang avy tao an-mpianatra mponina. In-bahoaka kolontsaina, ny lakandrano faritra dia nasongadina ao amin'ny sarimihetsika Amelie ho toy ny toerana itsinjahana vato.
Vidiny Marseilles mankany Lyon Train
Ny vidin'ny fiaran-dalamby any Lyon
5. Best Free Zavatra atao, raha Paris Fa Free: Des Buttes Chaumont Park
Ny zaridaina voalohany eo amin'ny 10 Free Zavatra hatao ao Paris lisitra! Tanàn-dehibe io zaridaina tsara tarehy no misy any avaratratsinanan'i Paris. Mampiavaka io zaridaina maitso ahitana farihy artifisialy amin'ny placidly milomano ganagana, ny nosy be vato ivon'ny ny farihy atao hoe Ile de Belvedere, Temple ny Sibyl (ho fahatsiarovana ny fahiny Tempolin'i Romanina ny Vesta in Tivoli) mihantona ny dimam-polo metatra ambonin'ny farihy. Hita vao tetezana mampifandray ny nosy ho any amin'ny sisa amin'ny valan-javaboary, ny foibe handeha Toerana fitsangantsanganana, ary tànana hafa kely bozaka maitso.
Faran'izay malaza hafa toerana ny fitsidihana izay, mazava ho azy, maimaim-poana! A tamim-boninahitra Arch, aingam-panahy ny Romanina Andohalambon'i Titus, izany tsangambato fahatsiarovana ny fiainan'ireo Frantsay nasionalista, izay niady tany amin'ny frantsay Ady Revolisionera sy ny Napoleonic Ady. Ambanin'ny Arc lainga amin'ny fasan'i ny Unknown Miaramila ny Ady Lehibe, ary dia voamariky ny lelafo mandrakizay izay efa mirehitra nanomboka niresaka fampitsaharana Day in 1921. Six tena zava-dehibe sary sokitra handravaka ny facades fotoana manan-danja ny tsirairay mampiseho ny Revolisionera sy Napoleonic Ady. Anisan'izany General Marceaus fandevenana, ny adin'i Austerlitz, Arcole, Jemappes, ary Aboukir, ary ny Fahalavoana avy any Aleksandria.
Nahazo fahafahana miditra amin'ny sehatra mijery azy sy nahita ny Arc akaiky no vola lany vola fa ny fomba fijery na Snapshot io tsangambato Mampitolagaga avy amin'ny Champs Elysees na fiara fitateram-bahoaka na fiara mivezivezy dia maimaim-poana tanteraka.
7. Best Free Zavatra atao, Paris: Parc Monceau
Io no valan-javaboary ho an'ny daholobe izay tamin'ny voalohany nahazo ny Duke ny Chartres. Izy no mpiray tam-po Mpanjaka Louis XVI. Ny zaridaina dia natao hitovy Garden teny anglisy nataon'i Louis Carmontelle. Maro ireo lafin-javatra manaitra an'ireo trano izay fahasoavana ny zaridaina. Anisan'izany Rotunda kely tao amin'ny zaridaina lehibe vavahady, ny kely piramida ejipsianina fahiny, romanina lala-mitafon'i, Shinoa iray Fort, Windmill ny holandey sy ireo curiosities avy manerana izao tontolo izao. Nitsidika ny valan-javaboary dia toy ny fitsidihana ny kolontsaina zava-mahatalanjona 'izao tontolo izao rehetra izao amin'ny kely.
8. Free Fashion Shows amin'ny Galeries La Fayette
Moa ve ianao te hahalala momba izay vaovao sy mitranga ao amin'ny renivohitry ny fomba izao tontolo izao? Ary aza malahelo fahafahana nanatrika ny iray tamin'ireo afaka mampiseho lamaody natao tao amin'ny Galeries La Fayette, isaky ny zoma amin'ny 3 PM. Ataovy azo antoka manao ny famandrihana an-tserasera, mialoha mba hahazoana antoka fisian'ny amin'ny takiana daty. koa, tsara dia tsara iray hafa ny asa maimaim-poana, raha any amin'ny Galeries La Fayette, dia ny mitsidika ny tampon-trano lavarangana ho iray amin'ireo tsara indrindra any Paris hevitra. No misy varavarankely miantsena rehefa afaka izany, ao amin'ny tsena mihitsy Arcade, raha manana fotoana fanampiny.
9. Open Air Cinema amin'ny The Parc De La Villette
Io pick ny Free zavatra tokony hatao ao Paris dia tsy ela ny taona, fa afaka mankafy sarimihetsika kalamanjana mandritra ny volana Jolay sy Aogositra (Alakamisy ka hatramin'ny alahady) any amin'ny iray amin'ireo tanàna lehibe indrindra zaridaina. Ny fampisehoana sarimihetsika Miovaova arakaraka ny mahazatra kokoa ankehitriny ny sarimihetsika. Boky ny seza tokotanin-tsambo, ary ho vonona ho faly cinematic sasany raha vao mahazo maizina.
10. Watch The Free Light Show amin'ny The Eiffel Tower
Rehefa maizina ny andro, isaky ny ora ny ora nandritra ny dimy minitra ny Tour Eiffel sparkles ary manome fahazavana ho an'ny rehetra fampisehoana mpijery, izany dia hitoetra ny kalazalahy de fanosotra ny Free zavatra tokony hatao ao Paris. Ny Place de Trocadero hanome anao ny tsara indrindra ho an'ny seho fanaovam-panavotana eo amin'ny tanàna.
Vonona ny hamonjy ny kitapom-batsy sasany Euros? lehibe! Train tapakila dia tsy eo amin'ny Free zavatra atao ao Paris, na izany aza, rehefa mampiasa Save A Train izy ireo azo antoka fa tsy lafo!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “10 Free Zavatra atao, Paris” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffree-things-paris%2F Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)